Translate whakahere from Maori to Burmese - MyMemory
Results for whakahere translation from Maori to Burmese
Kotahi koati toa he whakahere hara
Kotahi koati toa hei whakahere hara
အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်သငယ်တကောင်
He whakahere tena mo te he: he pono tona he kiaIhowa
ဒုစရိုက်ဖြေသောယဇ် ဖြစ်သတည်း။ အကယ်စင်စစ် ထိုသူသည် ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားရာ ရောက်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
Kihai koe i ahuareka ki nga tahunga tinana ki nga whakahere hara
မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်များကို အားရနှစ်သက်တော် မမူသောအခါ၊ ကျမ်းစာလိပ်၌ အကျွန်ုပ်ကို အမှတ်ပြု၍ ရေးထားသည်နှင့် အညီ၊
Patua nga whakahere o te tika, me te okioki ano kiaIhowa
တရားသဖြင့်ယဇ်ပူဇော်၍ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားကြလော့။
Na, ki te murua enei, kahore he whakahere mo nga hara i muri iho
ထိုအပြစ်တို့ကို လွှတ်ပြီးလျှင် နောက်တဖန် အပြစ်ဖြေသော ပူဇော်သက္ကာကို ပြုစေရာအကြောင်းမရှိ။
Kia kotahi koati toa ano hoki hei whakahere hara, hei whakamarie mo koutou
အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုအံ့သောငှါ၊ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်သငယ်တကောင်ကိုလည်း ပူဇော်ရမည်။
အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုအံ့သောငှာ၊ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ဘို့ ဆိတ်တကောင်ကိုလည်း ပူဇော်ရမည်။
Me tahu anoeia te ngako o te whakahere hara ki runga ki te aata
အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ကောင်ဆီဥကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့ရမည်။
Na ko te ture tenei mo te whakahere mo te he: he tino tapu tena
ဒုစရိုက်ဖြေသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတရားဟူမူကား၊ အလွန်သန့်ရှင်းပေ၏။
A ki te mea he koati tana whakahere, me tapae ki te aroaro o Ihowa
ဆိတ်ကို ပူဇော်လိုလျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဆက်ပြီးမှ၊-
Me tahu katoa nga whakahere totokore katoaate tohunga: kaua hei kainga
ယဇ်ပုရောဟိတ်အတွက် ပြုသောဘောဇဉ် ပူဇော်သက္ကာရှိသမျှကို အကုန်အစဉ် မီးရှို့ရမည်။ အလျှင်းမစားရဟု မိန့်တော်မူ၏
Me whatiwhatiekoe, ka riringi ai ki te hinu: he whakahere totokore tena
ထိုမုန့်ကို ချိုးဖဲ့၍ ဆီကို လောင်းရမည်။ ဘောဇဉ် ပူဇော်သက္ကာ ဖြစ်သတည်း။
Ki te tapaeaeia he reme hei whakahere mana, me tapae ki te aroaro o Ihowa
သိုးသငယ်ကို ပူဇော်လိုလျှင်၊ ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်၌ ဆက်ပြီးမှ၊
Kotahi nei hoki tana whakahere,atika tonu iaia ake ake te hunga ka oti te whakatapu
အကြောင်းမူကား၊ စင်ကြယ်သောသူတို့သည် ထာဝရစုံလင်ခြင်းငှါ၊ တခါတည်းပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ပြုတော်မူ၏။
Me hoatu tenei whakahereete iwi katoa o te whenua ki te rangatira i roto iaIharaira
ထိုချီးမြှောက်ရာပူဇော်သက္ကာကို ပြည်သူ ပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ဣသရေလမင်းသားအား ဆက်ရကြမည်။
Manaemahara ki au whakahere katoa,emanako ki au tahunga tinana. (Hera
ကိုယ်တော်၏ ပူဇော်သက္ကာအလုံးစုံတို့ကို အောက်မေ့၍၊ မီးရှို့သောယဇ်ကို လက်ခံတော်မူပါစေ သော။
Naekai koutou i te taro o te whenua, me whakahere he whakahere hapahapai kiaIhowa
ထိုပြည်၌ဖြစ်သော မုန့်ကို စားကြသောအခါ၊ ထာဝရဘုရားအား ချီးမြှောက်ရာ ပူဇော်သက္ကာကို ဆက်ရ မည်။
10台 (Japanese>English)vi prego di trovare (Italian>English)最低退休和丧失工作能力养老金从 (Chinese (Simplified)>French)caller id (English>Portuguese)廖天琪去年晓波逝世周年 (Chinese (Simplified)>Japanese)i will call you back (English>Kannada)只因为中国成为经济强国而感到欣慰 (Chinese (Simplified)>English)kandravi (Tamil>English)inschakelingsbedrijf (Dutch>French)近日的中央经济工作会议 (Chinese (Simplified)>English)aj tuition ki chutti h (Hindi>English)story of africa (Tagalog>English)vykonávám (Czech>Slovak)method of measuring the thermal conductivity (English>German)zīdkoka (Latvian>Hungarian)es q no ando el diccionario (Spanish>English)linker (Dutch>Bielarus)da toi (Vietnamese>English)ಸ್ವಾಚ್ ಭಾರತ್ adhiyana (Kannada>English)revisionism (English>Estonian)теттнанг (Russian>English)bissina (Italian>German)she failed to keep with (English>Italian)ren'ee (Italian>English)만드셨어요?? (Korean>English)